GreenRubino si loo horumariyo qorshaha suuqgeynta dalxiiska cusub ee gobolka Washington
Bogga ugu weyn|GreenRubino si loo horumariyo qorshaha suuqgeynta dalxiiska cusub ee gobolka Washington
Iyadoo ka tarjumeysa maamulaha aasaasiga ah ee Ganacsiga iyo Isbahaysiga Dalxiiska ee Washington, qorshaha suuqgeynta ayaa xoojin doona miyiga iyo bulshooyinka aan la hubin iyadoo qeyb ka ah qorshihii ugu horreeyay ee dhiirrigelinta dalxiiska ee dowladdu maalgeliso muddo lix sano ah..
OLYMPIA, WA - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington, oo kaashanaysa Isbahaysiga Dalxiiska Washington (WTA), waxay u dooratay GreenRubino inay tahay wakaalada diiwaanka si loo horumariyo loona soo saaro qorshe suuq geyn dalxiis oo cusub gobolka.
Kow iyo toban shirkadood oo ka kala yimid daafaha dalka ayaa ku tartamay qandaraaska, taas oo ka dhalan doonta qorshe ballaaran oo la soo jeediyay oo loogu talagalay suuq-geynta gobolka heer gobol, iyo heer qaran. Qorshaha suuqgeynta dalxiiska ayaa la qorsheeyay in la dhameystiro bisha Maarso 2018. Ganacsiga iyo Isbahaysiga Dalxiiska ee Washington ayaa si wada jir ah u kormeeri doona una hagi doona horumarka qorshaha. Qorshahan waxaa lagu maalgeliyaa qoondaynta miisaaniyadda hawlgalka gobolka ee 2017-19 waxaana loogu talagalay in loo oggolaado Ganacsiga iyo WTA inay soo saaraan qorshe loo gudbin doono sharci dejinta si ay u tixgeliyaan oo ah waddo horay loogu marayo dadaalka dalxiiska gobolka.
Dhiirrigelinta waxyaabo badan oo dabiici ah, soojiidasho iyo madadaalo isugu jira oo ku saabsan miyiga iyo bulshooyinka aan adeegyada laga helin ee gobolka oo dhan ayaa mudnaanta koowaad siin doonta qorshaha, sida uu sheegayo Robb Zerr, oo ah agaasimaha suuqgeynta ee Waaxda Ganacsiga.
"Waxaan rajeyneynaa inaan la shaqeyno WTA iyo GreenRubino si aan u gaarsiino soo-jeedin ku saabsan qorshe suuq-geyn ah oo soo jiidata booqdayaasha qayb kasta oo ka mid ah gobolkeenna cajiibka ah, sidoo kale waxaan wacnaa kor u qaadista bulshada reer miyiga ah ee dalxiisku u noqon karo darawal dhaqaale oo muhiim ah," ayuu yiri Zerr . “GreenRubino waxay khibrad badan u leedahay mashruuca. Sanadihii la soo dhaafay, hay'addu waxay la shaqeyneysay liis gareyn dalxiis iyo macaamiishii martigelinta, oo ay ku jiraan mashaariicdii kale ee gobolka Washington.
"Dalxiisku waa warshadda afaraad ee ugu weyn Washington, oo dhaqaaleheena u keenta in ka badan 21 bilyan oo doollar isla markaana siisa 177,000 shaqo," ayuu yiri Mike Moe, agaasimaha maamulka ee Isbahaysiga Dalxiiska Washington Si kastaba ha noqotee, tan iyo 2011 warshadaha dalxiiska ee Washington waxay la kulmeen guuldaro tartan ah gobolada sida Oregon iyo Montana oo sanadkii ku bixiya $ 19-32 milyan si ay u soo jiitaan dalxiisayaasha. Waxaan ku faraxsanahay inaan la shaqeyno GreenRubino si loo abuuro qorshe suuq-geyn ah oo u adeegi doona khariidad-mareenka marka sharci la soo saaro si loo maalgaliyo dib-u-soo-celinta dadaal suuq-geyn dalxiis oo gobolka oo dhan ah. ”
“Inaad dhahdo GreenRubino wuxuu ku faraxsan yahay balanqaad cusub oo loo sameeyay dalxiiska Gobolka Washington waa wax aan laga fiirsan - waan ku faraxsanahay,” ayuu yiri lamaanaha Cam Green. “Tani waxay si fiican u dhameystireysaa khibradeena dalxiis iyo soo dhaweynta martigelinta. Kooxda oo dhami waxay aad ugu faraxsan tahay shaqadii aan abuurnay ee ah wakaaladda suuqgeynta dalxiiska gobolka intii u dhexeysay 2008 ilaa 2011. Waxaan si aad ah uga warqabnaa saameynta baaxadda weyn leh ee dalxiisku ku yeeshay gobolka oo dhan waana ku faraxsanahay inaan ka shaqeyno qorshaha suuqgeynta istiraatiijiga ah ee gobolka oo dhan.
Ku saabsan Isbahaysiga Dalxiiska Washington
Isbahaysiga Dalxiiska Washington (WTA) waa urur 501 (c) (6), oo ay aasaaseen daneeyayaasha warshadaha ujeeddadiisuna tahay u doodista, dhiirrigelinta, horumarinta iyo joogtaynta fayo-qabka dhaqaale ee warshadaha dalxiiska Washington. Wixii macluumaad dheeraad ah booqo watourismalliance.com.
Penny Thomas, Xafiiska Saxaafadda Ganacsiga, 206-256-6106
Mike Moe, Agaasimaha Maamulka, Isbahaysiga Dalxiiska Gobolka Washington, 425-444-0589
Dooro Washingtonhorumarinta dhaqaalahaWar-saxaafadeedXoojinta bulshadadalxiiska
← Wenatchee waxay ku dhowaad $ 1 milyan ku bixisay maalgalinta gobolka ee mashruuca kordhinta McKittrick Street Xafiiska Ombuds-ka ee Naafada Koritaanka ee Gobolka ayaa furay degel la heli karo →